Taganka मा 42th stalin गरेको इन्धन ट्यांक
सबैभन्दा सरकारको युद्ध को घटना मा आफ्नो सुरक्षा ख्याल। कुनै पनि मामला, अन्तर्गत जमीन हो एकदम सहज छन् accustomed उच्च अधिकारी। साधारण नागरिकहरु लागि पनि निर्माण आश्रय, तर उनि धेरै सजिलो, र पर्याप्त सबै छन्।
सैन्य र राजनीतिक व्यवस्थापन संरचना को प्रदर्शन हावा आक्रमण एक खतरा को घटना मा सुरक्षित गर्न इच्छा एकदम तर्कसंगत र न्यायसंगत छ। कुनै पनि पहिला आक्रमण गर्ने देश वा व्यक्ति को मुख्य लक्ष्य मुख्यालय र संचार केन्द्र, सैनिक बन्न र औद्योगिक सुविधाहरु पहिले नै दोस्रो बारी मा प्रभाव पार्ने विषय हो।
भूमिगत सरकार निवास को निर्माण लामो आगमन अघि धेरै देशहरूमा थाले आणविक हतियार को, तर ती सबै भन्दा को डिजाइन सुविधाहरू परमाणु विस्फोट सामना गर्न सक्छन्। म यसको अत्यधिक बल मारा हिटलर गरेको इन्धन ट्यांक को बर्लिन (अब संरक्षित) को रैह Chancellery नजिकै 30 सेकेन्ड मा बनाए।
समारा मा stalin गरेको इन्धन ट्यांक (त्यसपछि Kuibyshev) रक्स मा carved थियो, काम गुप्ति मा गरेको थियो। यस्तो ठूलो भवन पनि HPP erected, जो, तर, पनि सजिला मा आउन मुखौटा। यो मार्जिन को सुरक्षा के अनुमति दिनुहोस् आज गर्न प्रयोग यो भवन लागि यसको अभिप्रेत उद्देश्य।
तर यो वस्तु त्यहाँ धेरै थिए, एक्लै थियो। यो रहस्यमय भूमिगत, Vinnitsa मा हिटलर को मुख्यालय कथित रेकर्ड समय मा जर्मन द्वारा निर्मित, केही केही महिना बारेमा ज्ञात छ। यसको आयाम एक मात्र वास्तवमा यो stalin गरेको गोप्य इन्धन ट्यांक थियो वहन गर्न सक्ने यति प्रभावशाली छन्, युद्ध अघि dug र शत्रु प्रयोग। जबकि रहस्य संरक्षण असम्भव छ कब्जा क्षेत्रहरूमा यस्तो ठूलो मात्रा काम पकड, गणना र डिजाइन उल्लेख छैन।
युद्ध को लागि तयारी गरे कसरी बस ध्यान, यो मास्को मेट्रो अवस्था एक गोप्य शाखा अग्रिम सिर्जना भएको छ भन्ने तथ्यलाई छ, Kremlin गरेको भित्री दोहोरिन्छ। Visiting stalin गरेको इन्धन ट्यांक, सामान्य मार्शल, मुख्य डिजाइनर वा अर्को अतिथि उहाँले पृथ्वी अन्तर्गत थिएन पक्का थियो, र "मास्टर" को कार्यालय मा, यो मनोवैज्ञानिक धेरै महत्त्वपूर्ण थियो र परम विजय भरोसा दिनुभयो।
युद्धपछिको वर्ष मा, वहाँ एक आणविक हडताल को एक धेरै वास्तविक खतरा थियो। यदि यो सोभियत नेतृत्व को सुरक्षाको लागि जिम्मेवार छन् गर्नेहरूलाई प्रतिक्रिया थिएन यो अनौठो हुनेछ। भवन गर्न आवश्यकताहरु stricter भएका छन्, विशेष, मान्छे को आश्रय uninfected रेडियोधर्मी प्रदूषण हावा मा हुनुको एउटा जरुरी समस्या भएको छ। मास्को मा stalin को नयाँ इन्धन ट्यांक जहाँ आदेश र नियन्त्रण परमाणु हतियार प्रयोग संग संघर्ष को मामला मा गरिनेछ एक स्थानको रूपमा गर्भधारण थियो।
सबै बिल्डर्स को forties, को समयमा खातामा लिन सकेन शीत युद्ध संरचना बारम्बार आधुनिकीकरण गर्न subjected गरिएको छ। आयाम विशाल यसलाई छोटकरीमा, निरीक्षण गर्न भूमिगत सुविधा यसलाई कम्तिमा एक र आधा घण्टा आवश्यक छ। यसको गहिराई 70 मिटर पुग्छ। ती दिन, संचार उपकरण र गुप्तिकरण सेवा आज छ भन्दा धेरै गाह्रो थियो, र केवल एक इलेक्ट्रनिक्स विशेषज्ञ सबै कर्मचारी 2,500 सेना शामिल बारेमा छ सय लिए।
आज stalin गरेको इन्धन ट्यांक मा Taganka गरिएका मा एक संग्रहालय। को "42 वस्तु", को मात्र उल्लेख जो छ दशक पहिले सक्छ खर्च जीवन भ्रमण गर्न चाहने धेरै छ। आज, मूल्य भद्र - मात्र 700 rubles। तपाईं सबै कुरा जाँच्न सक्नुहुन्छ मुद्रा लागि, विषयगत भिडियो र एक आणविक पाठ्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका विरुद्ध हडताल, मजा थाह गर्न। यो व्यायाम, खैर, धेरै पटक अधिकारीहरु को 50s र 60s मा कर्तव्य बारम्बार, र तिनीहरूले कहिल्यै जानकारी थिए प्रत्येक समय, प्रशिक्षण सुरु वा झगडा छ।
यो मास्को त्यहाँ तथापि, उहाँले "राष्ट्रका पिता" उहाँलाई उहाँको साथ सम्मान कहिल्यै, Izmailovo जिल्ला stalin एक इन्धन ट्यांक छ, कि ज्ञात छ। जाहिर छ, यो एक जगेडा रूपमा बनाइएको थियो, र यो उहाँको नियुक्ति सबै ध्यान भंग भएको थियो सम्भव छ। कुनै पनि मामला मा, काम र सामाग्री गुणस्तर यी वस्तुहरु को कुनै पनि एकदम आज प्रयोगको लागि उपयुक्त छ भनेर उच्च छ। र निर्माण गरिएका छन् कति त्यहाँ - यो दिन एउटा रहस्य।
शिकार र माछा मार्ने - मासु खाना उत्पादन गर्न अनुमति जो आदिम मान्छे, को गतिविधि
ध्रुवीय अन्वेषक Georgy Sedov: जीवनी, खोल्ने
अभिव्यक्ति कहाँ: "अनि तपाईं Brutus"
निकोलस द्वितीय बोर्ड निकोलस 2. परिणाम
हर्कुलेसक्लस्टर (नक्षत्र)। यो नक्षत्र हर्कुलेसक्लस्टर भनिन्छ गर्न प्रयोग गरिएको
नग्न-मेकअप। कसरी नग्न शैलीमा मेकअप गर्न?
मौसम विज्ञान मूल Emergencies। सार्वजनिक सुरक्षा
आरामदायक बीच होटल4* (पटाया, थाईल्याण्ड): विवरण र समीक्षा
"हार्डकोर" (फिलिम): समीक्षा, विधा, डाली, षड्यन्त्र,
संगीत र आफ्नो सुविधाहरू मार्फत
बेलारुसी स्वास्थ्य रिसोर्ट्स। "Narochansky बीच" (मिन्स्क क्षेत्र)। समीक्षा र फोटो
Yaropolets मा छोडेर मन्दिर: ल्यान्डमार्क, उल्लेखनीय
होटल क्रेते (Hersonissos)। विवरण